मध्यरातमा पवनको कोठा’भित्र अजिबको जीव खसेपछि…..(भिडियो सहित)
Homeसमाचारमध्यरातमा पवनको कोठा’भित्र अजिबको जीव खसेपछि…..(भिडियो सहित)
September 19, 2020 admin समाचार 13334
बुध’बार राति साढे १ बजेको हुँदो हो। कैलालीको कैलारी-५ का २३ वर्षीय पवन चौधरी ठूलो आवा’ज आएपछि ब्युझिए। टेबल पंखा लगाएर सुतेका उनी स्टेन्ड’मा केही ठोकिएर आ’वाज आए पछि उठेका थिए।
हेर्दा अँध्यारोमा केही देखिएन। मोबा’इलको टर्च बालेर हेर्दा त पंखा तल खाटभित्र बिरालो पसेजस्तो ठाने। ‘सुरूमा त के हो सोचें, बिरालो हो किजस्तो लाग्यो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
पछि खाटमु’नि राम्ररी हेरेपछि त कहिले नदेखेको अजिब’को चिज देखे। के आयो भनेर उनी डराए। श्रीमती’लाई उठाए। खाटमै बसेर फोटो खिचे। धेरै बेर बस्न डर लाग्यो, उनीहरू झ्यालबाट बाहिर भागे।
परिवार’का अरू पनि बाहिर आए। पवनले छिमेकी अंकललाई फोन गरे। फोन नउठेपछि घरमै गएर डाके। अंकल’लाई फोटो देखाएँ, उहाँले पनि चिन्नुभएन,’ उनले भने। के हो यो? कहाँदेखि आयो? भनेर अंकलले उल्टै पवनलाई प्र‘श्न गरे। उनले अर्को घरका सीता’राम बाजे’लाई पनि बोलाए।
त्यसपछि ढोका खो’लेर भित्र पसे। सीताराम बाजे’ले त्यो अजीवको जीव चिने- यो त साल माछा हो। ६५ वर्षका बाजेले पहिले पनि देखेका रहेछन्, चिनिहाले,’ पवनले भने।
घरमा बोलेको सु’नेपछि छिमे’की पनि हेर्न आए। रातको साढे दुई बजेतिर सालकला’ई तेल राख्ने टिनको ड्रममा राखे। त्यसपछि पवन’को परिवार र अरु २-४ जना छिमेकी रात’भर नसुतेरै बसे।
‘अब के गर्ने भन्ने सोच्यौं। प्रहरी’लाई खबर गरे यसलाई आर’क्षमा राख्छन् कि जुमा राख्लान् भन्ने कुरा गर्‍यौं,’ उनले भने। बिहान उज्यालो भएपछि त मान्छे’हरू कहाँ-कहाँबाट हेर्न आए। उनको घरमा मेला लागेजस्तो भयो।
‘कहाँदेखि मान्छे आए थाहै भएन,’ उनले भने। ६ बजेतिर २ जना प्रहरी उनका घरमा आए। उनी’हरुले पनि सालक’लाई हेरे र फोटो खिचे।
वनका मान्छे ८ बजे’तिर पुगे। दुई जना मान्छे गाडी’मा धनगढी’बाट आएका थिए। उनी’हरुले कहाँदेखि आयो, कसरी आयो, कति बजे आयो? जस्ता कुरा सोधे। ‘के-के सोध’पुछ गरे। मेरो नाम पनि लेखे,’ पवनले भने।
काग’जमा लेखेर मुचुल्का तयार भएपछि त्यस’लाई राखेको ड्रम’सहित गाडीमा लगेर हसुलिया प्रहरी चौकीमा लगेर गए। पवन पनि आमा र अरू केही छिमेकी’सँग प्रहरी चौकी गए।
‘घरदेखि त त्यतिकै लगे त्यहाँ केही पुरस्कार दिन्छन् कि भनेर गएका थियौं,’ उनले भने। उनले वनका कर्मचारी’लाई पुरस्कार पाऊँ भनेको बताए। उनीह’रूले आफूले दिने होइन हाकि’मसावले दिनुहुन्छ भने।
‘दुई हजार पुरस्का’र लिन धन’गढी पुग्नुपर्ने भनेपछि जाने साधन नभएकाले गइनँ,’ उनले भने। अहिले पवनलाई गाउँका मान्छेले यो त करोडैंमा बिक्छ भन्दैछन्। तिमी’हरूले हल्ला नगरी सु’रूमा देखेकाले किन अन्त भनेको भन्न थालेका छन्।
‘अहिले गाउँका मान्छे त्यो बेचे:को भए त माला’माल हुन्थ्यौ भन्दैछन् तर कहाँ बिक्छ, कसले किन्छ के थाहा हामीलाई,’ उनले भने। डिभिजन वन कार्या’लय धनग’ढीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले सालक भेटिएको भन्नेबारे बिहान साढे ७ बजेतिर खबर पाएको बताए। ‘कर्म’चारीले फोन गरेर साल’क फेला परेको भने। मैले उद्धा’र गर्नुपर्छ सुरक्षित राख्न भनें,’ उनले भने।
सकुशल अवस्थामा भेटिएको दुर्लभ जन्तु भएकाले उद्धार गर्न उनले २ जना कर्मचारी पठाए। ‘त्यो घा इते होइन त्यसैले भेट’नरी बोलाउन परेन,’ उनले भने।
कर्मचारीले मुचुल्का बनाई सालक’लाई ड्रममै गाडीमा डिभिजन कार्यालय धनगढी ल्याए।
उक्त सालकको तौल तौल ८ किलोग्राम थियो। ‘हामीले शुक्ला’फाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज’मा छोड्ने भनेका थियौं तर जनता’को माग त्यही जंगलमा छोड्नुपर्छ भन्ने आएपछि बसन्ता जैविक वन’मै छोडियो,’ उनले भने।
यताको वन्य’जन्तु उता किन पठाउने भनेर बसन्ता जैविक वनमा मानिसहरूको चहल’पहल नहुने गरी मुचुल्कासहित बनाई छोडेको उनले जानकारी दिए।उनले साइ’टिस अनुसुची १ मा सूची’कृत दुर्लभ प्रजातिका सालक रहेको बताए।
विशेषगरि सालको जंगलमा पाइने सालक संसार’भर चो री शि कारीबाट अति संकटापन्न भएको वन्य’जन्तु हो। नेपा’लमा समुद्री सतहदेखि करिब दुई हजार मिटर’सम्मको उचाइका जंगलमा सालक पाइन्छ। यस जीवको दाँत हुँदैन र यसको जिब्रो ६० देखि ७० सेन्टिमि’टरसम्म फैलिन सक्छ।
सालक आहारा’को खोजीमा रा’तमा मात्र निस्कने गर्दछ। कतैबाट आ क्रमण भयो भने यो भा ग्दैन तर भकुण्डोको आकारमा गुडुल्किएर बस्दछ।
नेपालमा पाइने स्तनधारी’मध्ये यो एउटैमात्र अन्त’र्राष्ट्रिय रूपमै अति संकटापन्न वन्यजन्तु हो।
यहाँ कालो खबटा भएको चाइ’निज प्याङ्गोलिन र फुस्रो खबटा भएको इन्डियन प्याङ्गो’लिन पाइन्छ। साना स्तन’धारी प्राणी संरक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार नेपालमा ४३ जिल्ला’मा सालक पाइन्छ। कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलल्धुरा’लगायतका जिल्ला’मा इन्डियन प्याङ्गोलिन पाइन्छ।
सालक नेपालको संरक्षित वन्यज’न्तु हो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०७३ अनुसार सालक मा र्ने, खरी’दबिक्री गर्ने वा ओसार’पसार गर्नेलाई पाँच लाखदे’खि १० लाख रुपैयाँसम्म जरि’वाना वा पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कै द वा दुबै स जाय हुन सक्छ। सविता बुढाले सेतोपाटीमा खबर लेखे’की छन् ।
December 24, 2020 admin समाचार 8809
गायक प्रताप दास र गा’यिका तुलसा लिम्बुको युगल स्वर रहेको गीत ‘नौ तले घर’ भिडियोसहित सा’र्वजनिक भएको छ । डान्सिङ शैलीको गीतमा डिपी खनालको शब्द र तारा प्रकाश लिम्बुको सं’गीत रहेको छ । गीतमा निरज
April 5, 2021 admin समाचार 6316
दिलिप राय’माझी र निरुता सिंह निकै चर्चित जोडी हो । उनीहरु फिल्म ुदर्पण छाँयाुवाट चर्चित भएका हुन् । उनी’हरुको फिल्ममा जमेको यो जोडीलाई द’र्शकले निकै मन पराए । त्यसपछि उनीहरुको जोडी धेरै फिल्ममा देखिए ।
आज मिति २०७८ साल जेष्ठ १९ गते बुधबारको राशिफल हे’र्नुहोस्
June 2, 2021 admin समाचार 5271
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) बाणिमा मधु’रता छाउनेछ । नयाँ कामको थालनि’ले मन प्रशन्न रहनेछ । मेहेनत र परीश्रम को कदर हुन सक्ने योग रहेको छ । नयाँ लगानिका